थाहा खबर: प्रदेश सरकारको काम गराईले गाउँ-समाजमा फाटो ल्यायो
मुगु : नेपालको सबैभन्दा ठूलो तथा कर्णाली प्रदेशकै गहना, रारा ताल मुगु जिल्लामा पर्छ। यस जिल्लामा एक नगरपालिकासहित चार स्थानीय तह छन्। त्यसमध्येको एक हो छायानाथ रारा नगरपालिका। नेपालको सबैभन्दा ठूलो रारा ताल पनि यसै नगरभित्र पर्दछ।
प्राथमिकता पाए र बाँकी कार्यकालमा नगरपालिकाले कार्य सम्पादनलाई कसरी अगाडि बढाएको छ? आदि विषयमा थाहाकर्मी नन्दबहादुर रोकायाले छायानाथ रारा नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिजंग शाहीसँग गरेको कुराकानी :
स्थानीय तहमा आएको तीन वर्षमा के के काम गर्नुभयो? उपलब्धि के के भए?
२ यो तीन वर्षका बजेट खर्च कति भयो? बजेट खर्च अनुसारको उपलब्धि हासिल भयो कि छैन?
३ यो तीन वर्षमा के कस्ता चुनौती भोग्‍नुभयो?
४ स्थानीय तह, प्रदेश र संघीयबीच काम गराइमा के कस्तो समन्वय रहने गरेको छ?
अबको दुई वर्षभित्रमा के के काम हुनेछन्?
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई मजबुद बनाउन अविभावक शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्षमा गौरवको योजनालाई प्रथामिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने छ।
अबका दुई बर्षमा जनतालाई अनुभति दिलाउने जस्ता काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौँ। विषयगत कार्यालयहरु, विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजहरुसंगको निरन्तर समन्वय र साझेदारीको अवधारणा आत्मसात गरी आगामी पाँच वर्षमा विकासका पूर्वाधारहरु तयार गर्दै सामाजिक रुपान्तरणको लक्ष्य नगरपालिकाले राखेको छ।
यो तीन वर्षमा जनताले स्थानीय सरकारबाट गरेको आशा र अनुभूति पूरा भए जस्तो लाग्छ?
पर्यटकीय क्षेत्र रारा पनि यहाँको नगरपालिकामै पर्छ। के छ राराको कोरानापछिको अवस्था?
रारामा पर्यटकहरु आकर्षित गर्न के के योजना बनाउनु भएको छ?
जसले सारंगी छाडेनन्, जसलाई सारंगीले छाडेन